ဉာဏ်ကောင်းသူတွေရဲ့ ဘုံတူညီချက် ၇ ချက် – Gentleman Magazine
အိုင်စတိုင်း၊ ရှတ်စပီးယား၊ မဒမ် မာရီကျူရီ သူတို့အားလုံးမှာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဘဝဇာတ်လမ်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ လူသားတွေကို အကျိုးပြုခဲ့ပုံခြင်းလဲ မတူညီပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တဲ့ ထူးချွန်တဲ့သူတိုင်းမှာ ဘုံတူညီနေတဲ့ အချက်လေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။
၁. အပြောင်းအလဲကို လက်သင့်ခံနိုင်ပါတယ်
ဉာဏ်ကောင်းသူတွေဟာ ပြောင်းလွယ် ပြင်လွယ်ရှိပြီးတော့ အခြေအနေမျိုးစုံကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ တွေ့ထင်ထားတာနဲ့ ရလဒ်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရင်တောင် ခေါင်းမမာကြပါဘူး။ ပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့လဲ လိုက်လျောအောင် နေတတ်ကြပါတယ်။
၂. သူတို့ မသိတာကို သူတို့ နားလည်ပါတယ်
ဉာဏ်ကောင်းသူတွေဟာ မသိဘူး ပြောရမှာ မကြောက်ကြပါဘူး။ သူတို့ မသိတဲ့ အကြောင်းအရာဆိုရင် အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့မသိရင် သူတို့ လေ့လာဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ သိဟန်ဆောင်မနေပါဘူး။
၃. သူတို့မှာ ရပ်တန့်မရတဲ့ စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိတယ်
အိုင်စတိုင်းက ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူက ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေ တော်မနေပါဘူး။ အရမ်း စူးစမ်းချင်ရုံလေးပါ တဲ့။ ပါတ်ဝန်းကျင်အပေါ် စူးစမ်းလေ့လာလိုစိတ်ဟာ ထူးချွန်ဖို့အတွက် သော့ချက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခြားသူတွေ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ထားမိတာလေးတွေကို ဂရုတစိုက် စူးစမ်းတတ်ကြပါတယ်။
၄. မေးခွန်းကောင်းကောင်း မေးတတ်ပါတယ်
ပုံမှန်လူတွေနဲ့ ထူးချွန်သူတွေ ကွာတာက မေးခွန်းကောင်းကောင်း မေးတတ်တာပါပဲ။ ဉာဏ်ကောင်းသူတွေက မေးခွန်းကောင်းကောင်းဟာ အဖြေကောင်းကောင်းလို တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ မေးခွန်းကောင်းကောင်းမေးတာဟာ စဉ်းစားလိုစိတ်ကို အထောက်အပံ့ပေးပြီး ပြသနာဟောင်းတွေအတွက် အဖြေအသစ်တွေ ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။
၅. သူတို့ဟာ တခြားသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံကို နားလည်ပါတယ်
ဉာဏ်ကောင်းသူတွေဟာ တခြားသူတွေ ခံစားနေရတာကို လိုက်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုခံစားနိုင်တာဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို သိနားလည်နိုင်စေပါတယ်။ ဉာဏ်ကောင်းသူတွေဟာ လူသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး စကားပြောရတာကို အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်။
၆. သူတို့ဟာ အသစ်တွေကို လက်ခံပါတယ်
ထူးချွန်သူတွေဟာ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေကို သဘောကျပါတယ်။ ရှေးရိုးစွဲမနေပါဘူး။ တခြားဘက်ကမြင်တဲ့ အမြင်ကို လေးစားပါတယ်။ အဖြေအသစ်တွေကို လက်ခံပါတယ်။
၇ သူတို့ဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ မယုံတတ်ပါဘူး
လွယ်လွယ်မယုံတတ်တာဟာ အသစ်တွေကို လက်ခံတတ်တာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလို့ ထင်ရပေမယ့် အဲဒိနှစ်ခုလုံး လိုအပ်ပါတယ်။ အသစ်တွေကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သက်သေကောင်းကောင်းပြပါ။ အဲ့လိုပါ။
ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေဟာ သက်သေအခိုင်အမာရှိတဲ့ အသစ်တွေကို လက်ခံနိုင်တဲ့စိတ် ရှိကြပါတယ်။
ဉာဏျကောငျးသူတှရေဲ့ ဘုံတူညီခကျြ ရ ခကျြ
အိုငျစတိုငျး၊ ရှတျစပီးယား၊ မဒမျ မာရီကြူရီ သူတို့အားလုံးမှာ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ ဘဝဇာတျလမျးတှေ ရှိကွပါတယျ။ လူသားတှကေို အကြိုးပွုခဲ့ပုံခွငျးလဲ မတူညီပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တျောတဲ့ ထူးခြှနျတဲ့သူတိုငျးမှာ ဘုံတူညီနတေဲ့ အခကျြလေးတှတေော့ ရှိပါတယျ။
၁. အပွောငျးအလဲကို လကျသငျ့ခံနိုငျပါတယျ
ဉာဏျကောငျးသူတှဟော ပွောငျးလှယျ ပွငျလှယျရှိပွီးတော့ အခွအေနမြေိုးစုံကို လကျခံနိုငျပါတယျ။ သူတို့ တှထေ့ငျထားတာနဲ့ ရလဒျက ပွောငျးပွနျဖွဈနရေငျတောငျ ခေါငျးမမာကွပါဘူး။ ပါတျဝနျးကငျြနဲ့လဲ လိုကျလြောအောငျ နတေတျကွပါတယျ။
၂. သူတို့ မသိတာကို သူတို့ နားလညျပါတယျ
ဉာဏျကောငျးသူတှဟော မသိဘူး ပွောရမှာ မကွောကျကွပါဘူး။ သူတို့ မသိတဲ့ အကွောငျးအရာဆိုရငျ အမှနျအတိုငျး ဝနျခံတတျကွပါတယျ။ သူတို့မသိရငျ သူတို့ လလေ့ာဖို့ ကွိုးစားပါတယျ။ သိဟနျဆောငျမနပေါဘူး။
၃. သူတို့မှာ ရပျတနျ့မရတဲ့ စူးစမျးလိုစိတျရှိတယျ
အိုငျစတိုငျးက ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ သူက ဘာမှ ထူးထူးထှထှေေ တျောမနပေါဘူး။ အရမျး စူးစမျးခငျြရုံလေးပါ တဲ့။ ပါတျဝနျးကငျြအပျေါ စူးစမျးလလေ့ာလိုစိတျဟာ ထူးခြှနျဖို့အတှကျ သော့ခကျြ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တခွားသူတှေ အမှုမဲ့ အမှတျမဲ့ ထားမိတာလေးတှကေို ဂရုတစိုကျ စူးစမျးတတျကွပါတယျ။
၄. မေးခှနျးကောငျးကောငျး မေးတတျပါတယျ
ပုံမှနျလူတှနေဲ့ ထူးခြှနျသူတှေ ကှာတာက မေးခှနျးကောငျးကောငျး မေးတတျတာပါပဲ။ ဉာဏျကောငျးသူတှကေ မေးခှနျးကောငျးကောငျးဟာ အဖွကေောငျးကောငျးလို တနျဖိုးရှိတယျဆိုတာ သိကွပါတယျ။ မေးခှနျးကောငျးကောငျးမေးတာဟာ စဉျးစားလိုစိတျကို အထောကျအပံ့ပေးပွီး ပွသနာဟောငျးတှအေတှကျ အဖွအေသဈတှေ ရှာပေးနိုငျပါတယျ။
၅. သူတို့ဟာ တခွားသူတှရေဲ့ အတှအေ့ကွုံကို နားလညျပါတယျ
ဉာဏျကောငျးသူတှဟော တခွားသူတှေ ခံစားနရေတာကို လိုကျခံစားနိုငျပါတယျ။ အဲလိုခံစားနိုငျတာဟာ လူတှရေဲ့ စိတျခံစားမှုကို သိနားလညျနိုငျစပေါတယျ။ ဉာဏျကောငျးသူတှဟော လူသဈတှနေဲ့ တှဆေုံ့ပွီး စကားပွောရတာကို အရမျးနှဈသကျပါတယျ။
၆. သူတို့ဟာ အသဈတှကေို လကျခံပါတယျ
ထူးခြှနျသူတှဟော အိုငျဒီယာအသဈတှကေို သဘောကပြါတယျ။ ရှေးရိုးစှဲမနပေါဘူး။ တခွားဘကျကမွငျတဲ့ အမွငျကို လေးစားပါတယျ။ အဖွအေသဈတှကေို လကျခံပါတယျ။
၇ သူတို့ဟာ လှယျလှယျနဲ့ မယုံတတျပါဘူး
လှယျလှယျမယုံတတျတာဟာ အသဈတှကေို လကျခံတတျတာနဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျတှလေို့ ထငျရပမေယျ့ အဲဒိနှဈခုလုံး လိုအပျပါတယျ။ အသဈတှကေို လကျခံနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သကျသကေောငျးကောငျးပွပါ။ အဲ့လိုပါ။
ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတှဟော သကျသအေခိုငျအမာရှိတဲ့ အသဈတှကေို လကျခံနိုငျတဲ့စိတျ ရှိကွပါတယျ။
Previous: တကိုယ်ကောင်းဆန်သူတွေကိုဆက်ဆံနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း
Next: စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို မြှင့်တင်ရန် လမ်းညွှန်